F-801 LAN Facial Recognition Fingerprint Access Control Terminal
 » hardware » ဇီဝဗေဒ
ဇီဝဗေဒ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် Access Control Time Attendance Reader, COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာကိုမှတ်မိခြင်းလက်ဗွေရာရယူထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်သူစာဖတ်သူ, LAN မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုလက်ဗွေရာထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်ခြင်း Terminal နှင့်, LAN မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုလက်ဗွေရာထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်ခြင်းအားလုံး -In-one စက်, LAN မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုလက်ဗွေရာထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်ခြင်းစက်, LAN Facial Recognition လက်ဗွေလက်လှမ်းမီမှုထိန်းချုပ်ရေးတက်ရောက်ခြင်းဆိုင်ရာ Terminal
တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်: မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု, လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှု, နီးကပ်ကဒ်အသိအမှတ်ပြုမှု; မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု + လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှု, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု + နီးကပ်ကဒ်အသိအမှတ်ပြုမှု.
စီပီယူ: A33 ပရိုဆက်ဆာ4cores, အကြိမ်ရေ 1.2GHz running
ရမ်: 256ကို MB
အသိအမှတ်ပြုထောင့်: 360လက်ဗွေအပြည့်အဝထောင့်အသိအမှတ်ပြုမှု°, 90မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု°
မျက်နှာ: (FRR / FAR） 0.001 / 1(%)
လက်ဗွေ: (FRR / FAR） 0.00001 / 0.1(%)
ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း: TCP / IP, ဝိုင်ဖိုင်
Wiegand protocol ကို: input ကိုနှင့် output ကို၏အုပ်စုတစု
အလုပ်လုပ်ဗို့ / လက်ရှိ: 12V1.5A, စိတ်ကြိုက်အရန်ကူးထားသောဘက်ထရီနှင့်အတူ
Ring function: အချိန်လက်စွပ်
အသိအမှတ်ပြုနည်းလမ်း: မျက်နှာ / လက်ဗွေ / ကဒ် / စကားဝှက်
မျက်နှာစွမ်းရည်: 1500 (3000 စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်)
ID ကဒ်ပမာဏ: 5000 ကတ်များ
အသိအမှတ်ပြုမှုမြန်နှုန်း: second1 စက္ကန့်
ဘာသာစကားရွေးချယ်မှု: တရုတ်ရိုးရှင်း / တရုတ်ရိုးရာ / အင်္ဂလိပ်
ကင်မရာ: အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်း HD ကင်မရာ
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား: 4.3 လက်မ TFT ခုခံထိတွေ့မျက်နှာပြင်
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အရွယ်အစား: 200× 165 × 70mm
F-801 မော်ဒယ် LAN မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုလက်ဗွေရာလက်လှမ်းမီမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အချိန်တက်ရောက်မှု terminal သည်မျိုးဆက်သစ်များသည်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုလက်လှမ်းမီမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် Haifeng မှတီထွင်ထားသောအချိန်တက်ရောက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်. ၎င်းသည် quad-core CPU ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုသော 1.2GHz ကြိမ်နှုန်းကိုအသုံးပြုသည်, ၄.၃ လက်မအရွယ် TFT high-definition resistive touch screen တစ်ခု, နှစ်ခုအနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်း HD ကင်မရာ, နှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီ Face အသိအမှတ်ပြုမှု features, အသစ်တစ်ခုကိုမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု algorithm ကို, မျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုပိုမိုတိကျစွာနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဖမ်းယူနိုင်သည်. မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ် 4.3 လက်မ, တက်ရောက်သူမြန်နှုန်း 1 ဒုတိယ, 3000 လက်ဗွေစွမ်းရည်, 1500 မျက်နှာစွမ်းရည်, 5000 ကဒ်စွမ်းရည်, 1000 စီမံခန့်ခွဲမှုစံချိန်စွမ်းရည်, 300,000 စံချိန်တင်စွမ်းရည်, U disk ကိုထောကျပံ့, နှင့်အတူ, စကားသံကို prompt ကို, အမည်ဖော်ပြချက်နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို, TCP / IP နှင့် WiFi ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်, terminal point တွေကိုအဆုံးမဲ့တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်, ကျောင်းအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်, စက်ရုံ, အုပ်စုတစ်စု, ရုံးတက်ရောက်မှုနှင့် Access Control စီမံကိန်းများ.
F-801 မော်ဒယ် LAN မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုလက်ဗွေလက်လှမ်းထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်သူပစ္စည်းကိရိယာများလွတ်လပ်စွာအသိအမှတ်ပြု mode ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်, အရာတစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်: မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု, လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှု, နီးကပ်ကဒ်အသိအမှတ်ပြုမှု; မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု + လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုမှု, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု + နီးကပ်ကဒ်အသိအမှတ်ပြုမှု.
အကြီးစားသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 500 မျက်နှာများ, 3000 လက်ဗွေ, 1000 ကတ်များ.
မျိုးစုံ authentication ကိုနည်းလမ်းများ: မျက်နှာ, လက်ဗွေရာ, နီးကပ်ကဒ်, စကားဝှက်ကို.
ဆော့ဗ်ဝဲတပ်ဆင် - အခမဲ့, စက်ကိုအလိုအလျှောက်တစ်ခု Excel ကိုဒေတာစားပွဲပေါ်မှာထုတ်ပေးပါတယ်.
U disk တင်ပါ / ဒေါင်းလုပ်. U disk ကိုစက်၏လည်ပတ်မှုအပြီးသတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်, ရိုးရှင်းမြန်ဆန်.
HD dual-camera. အထူးအနီအောက်ရောင်ခြည် / Dual Camera ပါ ၀ င်သည်, အသိအမှတ်ပြုမှုပိုမိုမြန်ဆန်သည်, ညဥ့်အခါအသိအမှတ်ပြုမှုမရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်.
ကြီးမားသော touch screen. 4.3-လက်မမြင့်တဲ့ TFT ထိတွေ့မျက်နှာပြင်, စစ်မှန်တဲ့အရောင်ပြသမှု, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုပိုမိုရှင်းလင်းသည်, ထိတွေ့မှုကပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်.
မူလ real-time အင်္ဂါရပ်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု. မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုအသစ်သည်မျက်နှာအသွင်အပြင်များကိုပိုမိုတိကျစွာနှင့်လျင်မြန်စွာဖမ်းယူနိုင်သည်. အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း, သက်ဆိုင်ရာအလင်းချိန်ခွင်လျှာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်နိုင်သည်, အရာကိုအလွန်အသိအမှတ်ပြုမှုနှုန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုထိရောက်မှုကိုပိုကောင်းစေတယ်.
ထူးခြား: မျက်နှာတစ်ခုစီသည်ထူးခြားပြီးထူးခြားသည်, အခြေခံကျကျနှင့်လုံးဝ swipe ကဒ်များအစားထိုးဖယ်ရှားပစ်, အဘယ်သူမျှမရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်.
မြန်: မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုသည်လျင်မြန်ပြီးတိကျသည်, ကဒ်များတန်းစီခြင်းနှင့်ပွတ်ဆွဲ၏ပြingနာကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ, ထိုသို့တစ်စက္ကန့်အတွင်းအသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်.
အဆင်ပြေ: ကဒ်များယူဆောင်လာမည်ကိုမေ့နေမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ, လက်ဗွေရာတရားမဝင်ဖြစ်ကြသည် / အခွံ, မျက်နှာသည်သင့်ကိုအမြဲပိုင်လိမ့်မည်, သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်တက်ရောက်သူကိုမေ့လျော့သို့မဟုတ်မေ့လျော့တော်မနိုင်.
လုံခွုံမှု: ဆက်သွယ်ရန်မရှိပါ, ပိုးမွှားများ၏ရောဂါကူးစက်မှုကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ, အချိန်နှင့်တပြေးညီတက်ရောက်ရန်လိုအပ်သည်, နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်ရုပ်ထုမလွန်နိုင်ပါ.
စမတ်: မျက်နှာ၏မိတ်ကပ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်, smart updates များ, သငျသညျကျပန်းဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်ပါတယ်.
သင်၏ထုတ်ကုန် F-801 LAN Facial Recognition Fingerprint Access Control Terminal ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်
prev: semiconductor capacitive လက်ဗွေကောက်ခံရေး, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလက်ဗွေ Reader ကို
နောက်တစ်ခု: ရိုးရှင်းသောလက်ဗွေ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးစက်, လက်ဗွေ + ID ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး, Wiegand26 လက်ဗွေ ID ကိုကတ် Reader ကို
သတ္တု Shell က Glass ကိုတံခါးလက်ဗွေ Lock ကို, Glass ကိုတံခါး Password ကိုလက်ဗွေ Lock ကို, Glass ကိုတံခါး Password ကို Proximity ကတ်လက်ဗွေ Lock ကို
လက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password ကိုလက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, Password ကို Proximity ကတ်လက်ဗွေ Glass ကိုတံခါးသော့ခတ်, အဘယ်သူမျှမဝါယာကြိုးလိုအပ်ပါသည်
Network ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးအချိန်တက်ရောက်ပေါင်းစည်းလက်ဗွေ
ရိုးရှင်းသောလက်ဗွေ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးစက်, လက်ဗွေ + ID ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး, Wiegand26 လက်ဗွေ ID ကိုကတ် Reader ကို
RFID Card ကို (144)